Fahfaahin: Qarax Ciidanka Puntland lagula eegtay Gaalkacyo | KEYDMEDIA ONLINE
Fahfaahin: Qarax Ciidanka Puntland lagula eegtay Gaalkacyo
Ma jirto illaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa, balse wuxuu imaanaya maalmo kadib markii Ciidanka amniga ay magaaladda ku qabteen shabakad qaraxyada iyo dilalka fulin jirtay.
GAALKACYO, Soomaaliya - Hal ruux oo shacab ahaa ayaa ku dhintay, labo askari oo katirsan Ciidanka Puntland ayaa ku dhaawacmey qarax caawa ka dhacay waqooyiga magaaladda Gaalkacyo, ee xarunta gobolka Mudug.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxay qaraxa nooca uu ahaa, iyadoo Saraakiisha amaanka Puntland wali aan ka hadlay sida ay wax u dhaceen. Dadka goobjooga ahaa ayaa sheegay in bam gacmeed lagu tuurey hotel ku yaalla magaaladda.
Sidoo kale, waxay sheegeen in bamka lagu tuurey Ciidan ku jiray howlgal roondo ah, oo amniga lagu sugayay. Rasaas la furay ayuu ku geeriyoodey qofka shacabka ah, sida ay KON u xaqiijiyeen goobjoogiyaasha.
Ma jirto illaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa, balse wuxuu imaanaya maalmo kadib markii Ciidanka ay magaaladda ku qabteen Shabakad qaraxyada iyo dilalka fulin jirtay.
0 Comments Topics: gaalkacyo puntland qarax
Yaa ka dambeeyay Qaraxa Muqdisho? [Sawirro]
Warar 10 July 2021 13:23
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay inay afar askari ay ku dishay weerarka oo dadka ku dhintay ay u badan yihiin shacab wadada marayay.
Fahfaahin: Qarax Is-miidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho
Warar 10 July 2021 11:09
Daacish-ta Soomaaliya oo dharbaaxo kulul ku dhacday
Warar 10 July 2021 8:57
Su’aallo badan oo ku geedaaman Musharaxnimada Deni
Warar 8 July 2021 8:32